Abanye abamangali base-US Roundup bakwenqaba ukusayina amadili okuhlala eBayer; $ 160,000 ukukhokha okujwayelekile kubhekwe - Ilungelo Lase-US Lokwazi
Abanye abamangali base-US Roundup bakwenqaba ukusayina amadili okuhlala eBayer; $ 160,000 ukukhokha okujwayelekile kubhekwe
Posted on July 30, 2020 by UCarey Gillam
Abamangali ecaleni laseMelika le-Roundup baqala ukufunda imininingwane yalokho okushiwo yiBayer AG's $ 10 billion ukukhokhelwa kwezimangalo zomdlavuza empeleni kusho kubo ngamunye, futhi abanye abakuthandi abakubonayo.
Bayer kusho ngasekupheleni kukaJuni bekuxoxiswane ngezindawo zokuhlala nezinkampani zabammeli abakhulu abambalwa esivumelwaneni esizovala ngempumelelo iningi lezimangalo ezingaphezulu kuka-100,000 ezisalinde iMonsanto, eyathengwa yiBayer ngonyaka ka-2018. Abamangali abasenkantolo bathi bathuthukisa i-non-Hodgkin lymphoma ukuvezwa kwe-Roundup kaMonsanto namanye amakhemikhali okubulala ukhula enziwe ngekhemikhali elibizwa ngokuthi i-glyphosate, nokuthi iMonsanto yahlanganisa ubungozi.
Ngenkathi isivumelwano ekuqaleni sasibonakala njengezindaba ezinhle kubamangali - abanye asebenenkinga yeminyaka yokwelashwa komdlavuza nabanye abamangalela abashade nabo abangasekho - abaningi bathola ukuthi bangagcina bengenamali encane, kuya ngohlobo lwe izici. Amafemu abameli, noma kunjalo, ayengafaka ephaketheni amakhulu ezigidi zamaRandi.
“Kuyimpumelelo ezinkampanini zabameli nokushaywa ngempama ebusweni balabo abalimele” kusho omunye ummangali, ongathandanga negama lakhe.
Abamangali batshelwa ukuthi kumele banqume emasontweni ambalwa ezayo ukuthi bazokwamukela yini ukukhokhelwa, yize bengeke bazi ukuthi bazokhokhwa malini uqobo kuze kube kamuva. Zonke izivumelwano zokukhokhelwa ziyalela abamangali ukuthi bangakhulumi esidlangalaleni ngemininingwane, babasongele ngokujeziswa uma bexoxa ngezindawo zokuhlala nanoma ngubani omunye ngaphandle "kwamalungu omndeni asondele" noma umeluleki wezezimali.
Lokhu kuthukuthelise abanye abathi bacabanga ukwenqaba lezi zindawo ngenhloso yokufuna ezinye izinkampani zabameli ukuze ziphathe izicelo zabo. Le ntatheli ibuyekeze imibhalo ethunyelwe kubamangali abaningi.
Kulabo abavumayo, izinkokhelo zingenziwa ngaphambi kukaFebhuwari, noma inqubo yokukhokha bonke abamangali kulindeleke ukuthi yelule unyaka noma ngaphezulu. Ukuxhumana okuthunyelwe kusuka kumafemu abameli kuya kumakhasimende abo e-Roundup kudweba zombili inqubo umuntu ngamunye ohlaselwe ngumdlavuza azodinga ukuyenza ukuze athole ukukhokhelwa kwezezimali nokuthi lokho kukhokhelwa kungabiza ini. Imibandela yamadili iyahluka kusuka enkampanini yabameli kuya enkampanini yabameli, okusho ukuthi abamangali abakhona ngokufanayo bangagcina ngokuhlala ezindaweni ezihluke kakhulu.
Esinye sezivumelwano ezinamandla kubonakala sengathi esinye okuxoxiswene ngaso IMiller Firm, futhi nalokho kuyadumaza kwamanye amaklayenti wefemu. Kwezokuxhumana namakhasimende, inkampani ithi ikwazile ukuxoxisana cishe ngama- $ 849 wezigidi ezivela eBayer ukumboza izimangalo zamakhasimende angaphezu kuka-5,000 160,000 Roundup. Ifemu ilinganisela inani lemali ekhokhwayo ekhokhwayo kummangali ngamunye cishe kuma- $ XNUMX. Leyo mali iyonke izophinde yehliswe ngokudonswa kwemali yabameli nezindleko.
Yize izimali zabameli zingahluka ngokuqina nangommangali, abaningi ecaleni leRoundup bakhokhisa amaphesenti angama-30-40 ngemali ekhokhwayo.
Ukuze bakufanele ukukhokhelwa, abamangali kumele babe namarekhodi ezokwelapha asekela ukuxilongwa kwezinhlobo ezithile ze-non-Hodgkin lymphoma futhi bakwazi ukukhombisa ukuthi badalulwa okungenani unyaka ngaphambi kokutholakala kwabo.
IMiller Firm ibilokhu ihamba phambili ecaleni leRoundup kusukela ekuqaleni, ithola imibhalo eminingi yangaphakathi yeMonsanto esize ukunqoba zonke izilingo ezintathu zeRoundup ezigcinwe kuze kube manje. IMiller Firm isingathe ezimbili zalezo ziqulwa, yaletha abameli abasuka enkampanini yaseLos Angeles yaseBaum Hedlund Aristei & Goldman abazosiza ecaleni lika UDewayne “Lee” Johnson ngemuva kokuba umsunguli weMiller Firm uMike Miller elimale kanzima engozini ngaphambi nje kokuthethwa kwecala. Amafemu womabili futhi asebenze ndawonye ekunqobeni icala labamangali bendoda nenkosikazi, U-Alva no-Alberta Pilliod. UJohnson uklonyeliswe ngama- $ 289 million kwathi amaPilliod aklonyeliswa ngaphezulu kwama- $ 2 billion yize abahluleli becala ecaleni ngalinye behlisa le miklomelo.
Ngasekuqaleni kwale nyanga, inkantolo yokudlulisa amacala eCalifornia wenqaba umzamo kaMonsanto ukuguqula isinqumo sikaJohnson, wakhipha isinqumo sokuthi kunobufakazi “obuningi” bokuthi imikhiqizo yakwaRoundup idale umdlavuza kaJohnson kodwa yehlisa umklomelo kaJohnson waba ngu- $ 20.5 million. Ukudluliswa kwamacala kusalindwe kwezinye izinqumo ezimbili ezibhekene neMonsanto.
Ukunquma ukuthi ummangali ngamunye uthola malini ekuxazululeni iBayer, umphathi wesithathu uzokora umuntu ngamunye esebenzisa izinto ezibandakanya uhlobo lwe-non-Hodgkin lymphoma ummangali ngamunye athuthukile; ubudala bommangali lapho exilongwa; ubunzima besifo somdlavuza womuntu kanye nokwelashwa abakukhuthazelele; ezinye izinto eziyingozi; kanye nenani lokuchayeka ababenalo emithini yokubulala ukhula yeMonsanto.
Isici esisodwa sokuxazululwa okwabamba abamangali abaningi benganakile bekufunda ukuthi labo ekugcineni abathola imali kuBayer kuzofanele basebenzise izimali zabo ukubuyisa ingxenye yezindleko zemithi yabo yokwelapha umdlavuza ebikhokhelwa yiMedicare noma umshuwalense wangasese. Ngokunye ukwelashwa komdlavuza kufinyelela emakhulwini ezinkulungwane ngisho nasezigidini zamaRandi, lokho kungasula masinyane inkokhelo yommangali. Amafemu abameli aqoqa osonkontileka abavela eceleni abazoxoxisana nabanikezeli bemishwalense ukuthi bafune ukubuyiselwa imali enesaphulelo, abamangali batshelwe. Ngokuvamile kulolu hlobo lwamacala okuhlukumeza abantu abaningi, lezo zibopho zezokwelapha zingancishiswa kakhulu, kusho amafemu ezomthetho.
Kwesinye isici sesivumelwano esamukelwa ngabamangali, izindawo zokuhlala zizokwakhiwa ukugwema isikweletu sentela, ngokusho kwemininingwane enikezwe abamangali.
Amafemu abameli kumele athole iningi labamangali babo ukuthi bavumelane nemibandela yezindawo zokuhlala ukuze baqhubeke. Ngokwolwazi olunikezwe abamangali, izindawo zokuhlala ziyafunwa manje ngenxa yobungozi obuningi obuhambisana nokuqhubeka nokwenza ezinye izilingo. Phakathi kwezingozi ezikhonjiwe:
IBayer isabise ngokufaka isicelo sokuqothuka, futhi uma inkampani ithathe leyo ndlela, ukulungisa izimangalo zeRoundup kungathatha isikhathi eside kakhulu futhi ekugcineni kungaholela emalini encane kakhulu yabamangali.
Inhlangano Yokuvikelwa Kwezemvelo (EPA) wakhipha incwadi ngo-Agasti odlule etshela uMonsanto ukuthi i-ejensi ngeke ivumele isexwayiso somdlavuza ku-Roundup. Lokho kusiza amathuba esikhathi esizayo kaMonsanto okunqoba enkantolo.
Ukubambezeleka kwenkantolo okuhlobene ne-Covid kusho ukuthi izivivinyo ezengeziwe ze-Roundup akunakwenzeka unyaka noma ngaphezulu.
Akuyona into engavamile ngabamangali abasenkantolo enkulu yokuhamba ngamacala amakhulu ukuba bahambe bedumele ngisho nezindawo ezibonakala zinkulu okuxoxiswene ngazo ngamacala abo. Incwadi ka-2019 “Iziphesheli zeMass Tort: Ukuxoxisana ngegumbi langemuva kumacala amaningi eMultidistrict”Ngu-Elizabeth Chamblee Burch, uSihlalo Wezomthetho we-Fuller E. Callaway e-University of Georgia, ubeka icala lokuthi ukuntuleka kwamasheke namabhalansi ezinkantolo zamacala amakhulu kuhlomulisa cishe wonke umuntu othintekayo ngaphandle kwabamangali.
UBurch ubeka njengesibonelo icala mayelana nomuthi we-acid-reflux Propulsid, futhi wathi uthole ukuthi kwabamangali abangu-6,012 abangena ohlelweni lokukhokha, bangu-37 kuphela abagcina bathole imali. Bonke abanye abakatholi zinkokhelo kodwa bese bevele bevumile ukuchitha amacala abo njengesimo sokungena ohlelweni lokukhokha. Labo bamangali abangama-37 bebonke bathola okungaphansi kancane kuka- $ 6.5 million (cishe ama- $ 175,000 umuntu ngamunye ngokwesilinganiso), ngenkathi amafemu abameli abahola phambili athola ama- $ 27 million, ngokusho kukaBurch,
Ukubeka eceleni lokho abamangali abangakwenza noma abangakwazi ukuhamba nabo, abanye ababukeli bezomthetho abasondele ecaleni le-Roundup litigation bathi kube nokuhle okukhulu okutholakele ngokudalulwa kokwenza okubi kwenkampani nguMonsanto.
Amazwe amaningana emhlabeni jikelele, kanye nohulumeni basekhaya kanye nezifunda zesikole, bathuthele ekunqandeni i-glyphosate herbicides, kanye / noma eminye imishanguzo yokubulala izinambuzane ngenxa yezambulo zecala leRoundup.
(Indaba iqale yavela ku- Izindaba Zempilo Yezemvelo.)
I-Monsanto Roundup Trial Tracker ezolimo, I-B-cell non-Hodgkin lymphoma, Bayer, I-Bayer Crop Sciences, umdlavuza, izinkantolo, imvelo, EPA, ukulima, FDA, Ukudla, glyphosate, zezempilo, ukhula, Monsanto, i-non-Hodgin lymphoma, izibulala-zinambuzane, RoundUp, ukuhlala, umbulali wokhula